Urban Pleasure, iyo nyowani yeMango kuunganidzwa kwematsutso | Bezzia
Urban Pleasure, iyo nyowani yeMango yekuunganidza kwematsutso
Pakati pevhiki dzekupedzisira kuchamhembe kwepeninsula tinoita kunge tiri mumatsutso. Chero ani zvake angati isu tinoda kuenderana neiyo rhythm yemafashoni mafemu ayo anototiratidza yavo zvitsva zvitsva zvemwaka unotevera. Iko kutsva kweMango mutsva kwave kuri kwekupedzisira kwatakawana kuburikidza ne mutsva muparidzi: Urban Pleasure.
Ichi chinyorwa chinoburitsa zvidimbu zvakakosha zveiyo nyowani yeMango kuunganidzwa kweiyo mwaka unotevera matsutso-chando 2021. Mwaka unozoonekwa nekusagadzikana uye kusarerekera mavara maererano nemaitiro aanofunga.
1 Neutral mavara
2 Kurudziro yemurume
3 Zvinowanikwa zvidimbu kubva muunganidzwa weMango
Iko kusadekara kweiyo nyowani yeMango kuunganidzwa inoratidzirwa neyakarerekera ruvara pendi ne chena, beige uye nhema seva protagonists. Makara akasanganiswa ari maviri, achikunda pakati penzira dzakasiyana dzeyeye nhema nechena pairing. Hembe-mbiri zvipfeko neiyi yakasarudzika kara yemubatanidzwa ine mukurumbira wakakura, kunyangwe iwo monochrome akapfeka mutema anewo.
Dhirosa pfungwa mune ino nyowani yeMango kuunganidzwa, iko kwevanhurume kufemerwa uko kunonwa vazhinji vehembe dzake. Iyo sutu nemabhurugwa akafutirwa uye nevesti muenzaniso wakajeka weizvi uye ndiyo nzira yekuzvibatanidza nehembe. Mavheti, masutu, mashati akatwasuka uye majasi anonaya, ekutanga mbatya dzechirume, ane basa rakakura mune ino nyowani yekushambadzira uye anounzwa senzira yakanaka yekugadzira dzakapfeka uye zvenguva pfupi zvipfeko zvezuva nezuva.
Zvinowanikwa zvidimbu kubva muunganidzwa weMango
Pamusoro pezvikumbiro zvambotaurwa, sutu, vanoita chinzvimbo chinotungamira mukuunganidzwa kweMango kutsva. akacheka hem hemgings kana nefuseau tsoka tambo. Izvi zvinosanganiswa mupepeti nevanotamba uye majuzi ekutanga kana madhirezi semusoro.
Zvakare kurova ndiyo seti ye miniskirt uye tweed bhachi iyo yakasimba inoshandisa zvakasiyana mune ino edhisheni. Iyo miniskirt inosanganisirwa mune yakasarudzika chaizvo manyorero nehembe refu-yakarukwa shati, jasi uye refu bhutsu. Iyo bhachi, yechikamu chayo, iine majini uye hembe yekufamba muchikepe mukutaridzika kukuru kweParis.
Uye isu tichine zvimwe zvidimbu zvitatu zvekuburitsa, fungidzira zvipi? Kune rimwe divi, iyo nhema nhema pinafore chipfeko icho chatinoona gare gare mumakatalog mifananidzo chakatinyadzisa isu zvishoma, iro rinoyerera rokwe rine pleated ruzivo zvakare mune nhema, uye iyo yakadhindwa pleated siketi Tinotenda iwe unogona kuwana zvakawanda kubva mazviri mukudonha.
Iwe unofarira here zvirevo zvitsva muunganidzwa weMango?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » Urban Pleasure, iyo nyowani yeMango yekuunganidza kwematsutso
5 makanganiso ekugadzira anowedzera kusvika kumakore